အိုင်လပ်ယူဗိုင်းရပ်စ် Darwin Bawasanta of Sky Internet ကစုံစမ်းရှာဖွမှုများပြုလုပ်ပြီးသည့်နောက်တွင် NBI ကလည်း မနီလာမြို့ရှိ Ramones ၏ တိုက်ခန်း သို့မကြာခဏ ခေါ်နေသော တယ်လီဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကို ရှာဖွေခဲ့သည်။ သူနေထိုင်သည့်အိမ်ကို ရှာဖွေခဲ့ပြီး Ramones ကို ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ထို့နောက် စစ်ဆေးမေးမြန်းမှု မတိုင်မီ Department of Justice (DOJ) တွင် ထားခဲ့သည်။ Onel de Guzman ကိုလည်း absentia တွင် ဒဏ်ငွေသတ်မှတ်ခဲ့သည်။'
Pop punk အစောပိုင်း protopunk နှင့် power pop တီးဝိုင်းများသည် pop punk သီချင်း၏ အခြေခံအလုပ်တွင် အကူအညီဖြစ်စေခဲ့သည်။ ၁၉၇၄တွင် punk rock တီးဝိုင်းများဖြစ်သော Ramones တီးဝိုင်းပေါ်
အိုင်လပ်ယူဗိုင်းရပ်စ် ၂၀၀၀ ခုနှစ်၊ မေလ ၅ ရက်နေ့တွင် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသား လူငယ် ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်မာ နှစ်ယောက်ဖြစ်သည့် Reonel Ramones နှင့် Onel de Guzman တို့က တီထွင်ခဲ့သည်။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၏ National Bureau of Investigation (NBI) ထောက်လှမ်းသူများ၏ ပစ်မှတ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ပန့်ခ် ယဉ်ကျေးမှု ပန့်ခ်ရုပ်ရှုင်တွေ အတော်များများရှိခဲ့ပြီး၊ ပန့်ခ်ရော့ခ်ဂီတ ဗွီဒီယိုတွေနဲ့ ပန့်စကိတ်ဗွီဒီယိုတွေဟာ လူသိအများဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ မှတ်တမ်းတင် ရိုက်ကူးနည်းဟာ ပန့်ခ်ရုပ်ရှင်ကားတွေရဲ့ အမှတ်အသားတစ်ခုပါပဲ။ နာမည်ကြီး ဂီတဝိုင်း တော်တော်များများဟာ ရုပ်ရှင်ကားတွေမှာ ပါဝင်ခဲ့ကြတယ်။ ဥပမာ Rock N' Roll Highschool ဇာတ်ကားမှာ Ramones အဖွဲ့၊ Great Rock N' Roll Swindle မှာ Sex Pistols အဖွဲ့သားတွေ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ လူသိများတဲ့ ပန့်ခ်တွေအကြောင်း ရိုက်ကူးထားတဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိကားတွေလည်း ရှိတယ်။ Sid and Nancy ဇာတ်ကားဟာ Sex Pistols အဖွဲ့သား Sid Vicious နဲ့ သူ့ရည်းစား Nancy Spungen တို့ စုံတွဲအကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီး၊ Sid အဖြစ် Chloe Webb တို့က သရုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။
ပန့်ခ် ဂီတ Punk rock၏ ပထမလှိုင်းသည် ရန်မှုသောခေတ်ဖြစ်ပြီး Ramonesတီးဝိုင်းမှ Tommy Ramone သည် အရင်ပုံစံထဲတွင် ဆန်းသစ်၍ နိုးတော်ထားသောအရာများဖြစ်သည်။ Punk magazine မှစာတည်း John Holmstrom က punk rock ဖြစ်လာခဲ့သည်မှာ rock ဖြစ်ရပ်များသည် Billy Joel နှင့် Simon and Garfunkel တို့ကို rock and roll ကဲ့သို့ယဉ်ပါးလာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ rock and roll ကိုတော်လှန်ရေးဂီတဟုလည်းခေါ်သည် ဟုဆိုသည်။ ဝေဖန်ရေးသမား Robert Christgau ၏ရေးသားဖော်ပြချက်မှာ "ဒါဟာယဉ်ကျေးမှုငယ်ဖြစ်ပြီး ဒါဟာ နိုင်ငံရေးဆိုင်မှုဝါဒများကို ငြင်းပယ်ထားသည်။"
အိုင်လပ်ယူဗိုင်းရပ်စ် ထိုအချိန်တွင် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၌ malware ရေးခြင်းနှင့် စပ်ဆက်၍ ဥပဒေတစ်စုံတစ်ရာမရှိပေ။ ထို့ကြောင့် Ramones နှင့် de Guzman တို့အား ပြည်နယ်အစိုးရရှေ့နေမှ စွဲချက်များအားလုံးကို ဖြေလျော့ပေးခဲ့သည်။ ဤ ဥပဒေချို့ယွင်းချက်ကို ဖြေရှင်းရန် ဖိလစ်ပိုင်လွှတ်တော်က အများပြည်သူဆိုင်ရာ ဥပဒေ အမှတ်-၈၇၉၂ ကို ပြဌာန်းခဲ့သည်။၎င်ကို အီလက်ထရွန်နစ်စီးပွားရေးဥပဒေ (E-Commerce Law) အဖြစ်လည်း သိကြသည်။ ဥပဒေကို worm တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ပွားပြီး နှစ်လအကြာ ၂၀၀၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် ပြဌာန်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် အိုင်လပ်ယူဗိုင်းရပ်သည် ထိုအချိန်က သက်ရောက်မှုပြင်းထန်သော ကွန်ပျူတာဗိုင်းရပ်အဖြစ် ကမ္ဘာ့စံချိန်ကို ရရှိခဲ့သည်။
ပန့်ခ် ဂီတ ၁၉၇၆ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် နယူးယောက်မြို့မှ ရေမွန်စ်(Ramones) ဂီတအဖွဲ့ နှင့် လန်ဒန်မြို့မှ ဆက်ပစ်စတို (Sex pistols) နှင့် သယ်ကလက်ရှ် (The Clash) ဂီတအဖွဲ့များသည် ထိုပန့်ခ်ဂီတသစ်ကို စတင်လှုပ်ရှားခဲ့သူများအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။ ထိုနောက်ပိုင်းမှ စတင်ကာ ပန့်ခ်ဂီတသည် ကမ္ဘာအနှံ့အပြားသို့ ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင် ပန့်ခ်ဂီတသည် လျင်မြန်စွာ ထွန်းကားခဲ့ပြီး အဓိက ယဉ်ကျေးမှုတစ်ရပ်အဖြစ် ပါဝင်လာခဲ့သည်။ အချို့နေရာများတွင် ပန့်ခ်ဂီတအား ရိုင်းစိုင်းသောဂီတ၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှ ကင်းလွတ်နေသည့် ဂီတဟုဆိုကာ ငြင်းဆန်ခဲ့ကြသည်။ ပန့်ခ်ဂီတ၏ ဖွဲ့စည်းပုံတွင် သီးသန့်မှတ်မိလွယ်သော ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံ၊ လူငယ်များ၏ အကြမ်းဖက်နိုင်ငံရေးအမြင်နှင့် အာဏာပိုင်ဆန့်ကျင်ရေး အိုင်ဒီယာများ ထွန်ကားလာခြင်းတို့လည်း ပါဝင်သည်။
ပန့်ခ် ယဉ်ကျေးမှု ပန့်ခ်အနုပညာလက်ရာတွေမှာ Collage ဆိုတဲ့ ဖြတ်ညှပ်ကပ် နည်းနာကိုလည်း မကြာခဏဆိုသလို အသုံးချတတ်ပါသေးတယ်။ အဲဒါကို Crass၊ Jamine Reid နဲ့ Wiston Smith တို့ရဲ့ လက်ရာတွေမှာ အထင်အရှားတွေ့နိုင်ပါတယ်။ John Holmstrom ဟာ ပန့်ခ်ကာတွန်းဆရာ တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး၊ The Ramones နဲ့ Punk Magazine အတွက် ပုံတွေ ရေးဆွဲပေးခဲ့တယ်။ Stuckism အနုပညာလှုပ်ရှားမှုဟာလည်း ပန့်ခ်အနုပညာ အပေါ်အခြေခံပြီး၊ ၂ဝဝ၄ ခုနှစ် လီဗာပူးလ်မြို့က Walker အနုပညာ ပြခန်းမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ သူတို့အုပ်စုရဲ့ ပထမဦးဆုံးပြပွဲကို The Stuckists Punk Victorian လို့ နာမည်ပေးခဲ့တယ်။ အဲဒီအုပ်စုကို စတင် တည်ထောင်ခဲ့ကြသူတွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Charles Thomson က ပန့်ခ်ကို သူ့ရဲ့ အနုပညာလမ်းကြောင်းမှာ အရေးအပါဆုံး ထိုးဖောက်ဖြစ်ထွန်းလာမှု တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။
Oi! Oi! သည် ၁၉၅၀နောက်ပိုင်းအပိုင်းတွင် အသိအမှတ်ပြုသော အမျိုးအစားတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ punk rock ၏ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းမှ ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ hardcore punk ကို လွှမ်းမိုးစေခဲ့သည်။ အသံများကို ရောစပ်ထားသည့် အစောပိုင်း punk တီးဝိုင်းများမှာ Sex Pistols, the Ramones, The Clash နှင့် The Jam နှင့် လွှမ်းမိုးမှုများနှင့် ၁၉၆၀ဗြိတိန်rock တီးဝိုင်းများမှာ Small Faces နှင့် The Who, Football Chants နှင့် pub rock တီးဝိုင်းများမှာ Dr.Feelgood, Eddle and the Hot Rods နှင့် The 101ers နှင့် glam rock တီးဝိုင်းများမှာ Slade နှင့် Sweet တို့ဖြစ်သည်။ Oi!သည်လည်း အဓိက skinhead – oriented အမျိုးအစားမှ ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်ဟု ယူဆနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ ပထမဆုံး Oi!တီးဝိုင်းများမှာ punk rocker များနှင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ လူများသည် skinhead သို့မဟုတ် punk label တပ်ဆင်ထားသည်။
Hard rock နှင့် punk သည် hard rock ကျင်းပရာနေရာများသို့ ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ အစောပိုင်း punk တီးဝိုင်း The Ramones drum solo နှင့် ဂစ်တာ solo များကို ဆန့်ကျင်၍ guitar solo မပါဘဲ သူတို့၏သီချင်းများကို ပိတ်ခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ rock ပုံစံသစ်များပေါ်ထွက်လာပြီး ၁၉၈၀ ထဲတွင် record စာရင်းထဲသို့ ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ ၁၉၇၇တွင် British American တီးဝိုင်း Foreigner သည် ၁၉၈၀အလယ်တွင် platinum album အချို့ကို ဖြန့်ချီခဲ့သည်။ Midwestern အုပ်စုများဖြစ်သော Kansas, REO Speedwagonနှင့် Styx တို့ stadium rock ကဲ့သို့ heavy rock ကို အခြေချခဲ့သည်။ Ven Helen Lead ဂစ်တာသမား Eddie Van Halen ၏စွမ်းရည်နှင့်အတူ Los Angeles ဂီတဖြစ်ရပ်မှ ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ သူသည် tapping ခေါ်ဂစ်တာတီးခတ်ခြင်း နည်းပညာ ၌ ကျော်ကြားလာခဲ့သူဖြစ်သည်။ Van Halen album Eruption တွင် ပြသထားသည်။ punkနှင့် disco ပေါက်ကွဲမှုပြီးနောက် လူကြိုက်များသော အမျိုးအစားကဲ့သို့ hard rock ကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီး လွှမ်းမိုးစေခဲ့သည်။